Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo si buuxda u joojiyey howlihii Hey’adda WFP ee dalka soomaaliya ( warsaxaafadeed) | Halganka Online
Iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen dalabaadka ka imaanaya Hey’adda WFP ee la xiriira inay dib ubilaabaan howlihii ay ka wadeen dalka soomaaliya ayaa Xarakada mujaahidiinta Alshabaab waxey maanta soo saartey warsaxaafadeed la xariira arinkaasi kaasi oo gebi ahaanba lagu hakiyey howlihii Hey’adaasi ay ka wadey gudaha dalka soomaaliya.
Warsaxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah ay heshey shabakada Halganka ayaa waxa uu u qornaa sidatan:
WFP waa inay joojisaa Dhamaan howleheeda Gudaha soomaaliya.
Muqdisho,(15/03/1431)- laga bilaabo maanta,dhamaan howlaha hay’ada WFP ka hayso gudaha soomaaliya waa la joojiyey ,hay’adana waa la mamnuucey kabib markii loo kuur galay dhibaatada mashruuceed loogu yeero Cunta qeybinta ay ku hayso dadweynaha soomaaliyeed.
Xafiiska la socodka Arimaha Hay’adaha Ajnabiga ah (OSAFA) ayaa u arkay inay tahey laga maar maan in la joojiyo howlaha hay’ada WFP ay ka qabato gudaha soomaaliya kadib markii la tixgeliyay arimaha soo socda:
Cabashada sii kordhaysa oo ay soo jeediyeen beeralayda soomaaliyeed kuwaasoo waayey suuq ay babeecadooda kaga ganacsadaan sababta keentey ay tahey WFP oo raashiin badan soo dajisa xiliga uu dalagu soo go’o.
Hey’ada oo qaybisa cunto dhacday kadib markii labaaray bakhaarada WFP waxaa cadaatay in raashinka ku kaydsan uu badankiisu yahey mid dhacay oo aan ahayn mid uu biniaadamku cuni karo.
Faafitaanka cuduro badan oo ka dhashay cuntada ay hay’adu qaybisay
Raashiinka hay’adu keento oo ah mid dano qarsoon oo ay siyaasadeedna laga leeyahey sida taakuleynta ciidamada Xabashida iyo Murtadiinta.
Kadib amarkii kasoo baxay OSAFA bishii koowaad kaasoo lagu joojiyey cutadii WFP wadanka dibadiisa ka keeneysay waxaa cadaatey:
In dadweynaha soomaaliyeed noqday mid isku kalsoon oo awooda inuu beerihiisa fasho,dhamaan beeralaydii horay uga caajistayna ay beerahoodii dib uga howl galeen.
In kalsoonidii beeralaydu badatay dalaggoodiinta suuq ay u heleen.
In dhamaan goobihii hay’ddu horay raashiinka u gaarsiin jirtey ay noqdeen kuwa soo kobcaya wa soo saarna leh.
In Zakawaatkii laga soo aruuriyey ay gaartey dhamaan dadkii tabaalaysnaa.
Waxa ala ogeysiinayaa dhamaan dadweynaha,ganacsatada,darawalada xamuulka iyo qof kasta oo qandaraas kula jira ama u shaqeeya hey’ada WFP inuu joojiyo shaqadaas laga bilaabo maanta . Qofkii lagu arko isagoo u shaqaynaya ama la shaqayna WFP ,kadib markii uu amarkan soo baxay,waxaa loo aqoonsanayaa qof gacan ku leh mu’aamaraadka hey’ada qeybna ka qaadanaya bur burinta dhaqaalaha umadda soomaaliyeed sidaas ayaana loola dhaqmayaa.
Waxaa dhamaan dadweynaha soomaaliyeed lagu dhiiru gelinayaa inay dadaalaan oo dhulkooda tabcadaan Allah kaliyana gacmaha u taagaan .waxaana loogu naseexaynayaa inay raacaan shareecada Islaamku u dajiyey Zakada si ay beerahoodu mira-dhalaan guulana u gaaraan.
Xafiiska la socdka arimaha Hey’adaha ajnabiga ah (OSAFA).
« Mas’uuliyiin ka tirsan Shabaabul Mujaahidiin oo booqasho Indha Indhayn ah ku tegay Dekadda Kismaayo iyo xarumaha kale ee muhiimka ah magaalada Kismaayo. Maxkamadda Islaamiga ee Wilaayada gobalka Banaadir oo xukuno ku ridday rag lagu soo eedeeyay dhac ay ugaysteen Shirkado ganacsi. »